Dhammaan wixii ku saabsan iPhone ee ku jira iPhone News | News IPhone (Bogga 19)
Wax ka beddelka waqtiga-bannaan ee Mophie Space Pack
Sida aan wada ogsoonahay, waxyaabaha milkiilayaasha iphone ay aad u dhaliilaan, xaga qalabka, waa waqtiga ...
Abka Runtastic waa la cusbooneysiiyay si loo soo dhoweeyo Orbit, oo ah qalab cusub oo la xiran karo
Runtastic waxay cusbooneysiisaa barnaamijkeeda iPhone si loogu isticmaalo Runtastic Orbit, raadraacaaga jimicsiga cusub.
Codsiga Calaamadaha ayaa laga heli karaa App Store kaas oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay wicitaanno qarsoodi ah u sameeyaan asturnaanta iyo amniga weyn.
Dib u Eegista Kiiska Jewistic Ballistic
Yahoo Cimilada barnaamijka cusbooneysiinta ogeysiisyada maalinlaha ah
Codsiga Cimilada ee Yahoo wuxuu helay casriyeyn cusub oo noo oggolaaneysa inaan helno laba ogeysiis maalinle ah oo ku saabsan saadaasha hawada ee meesha.
Sida loo Dayactiro Dhibaatooyinka Lacag Bixinta fiilooyinka Laydhka
Inta badan dhibaatooyinka lacag bixinta ee fiilooyinka hillaaca ayaa si fudud lagu xalliyaa iyadoo lagu sharraxayo nadiifinta alaabada aad guriga ku haysato.
Wax walba oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato wax ku iibsiga barnaamijka
Abka-ku-iibsiga ama abka-iibsigu wuxuu sii wadaayaa inuu u geysto dhibaatooyin isticmaaleyaasha. Waxaan sharxeynaa sida loo qaabeeyo wax walba si looga fogaado.
Mikey Digital, makarafoonka laga helo Blue Microphones ee iPhone
Mikey Digital waa makarafoon istiraatiijiyad istiraatiijiyad istiraatiiji ah oo isweydiinaya iPhone-kaaga oo u rogaya qalab duubitaan mobile ah.
Qolka, si buuxda ugu soo cusbooneysii iPhone-ka adiga oo aan hillaaca waxyeello u geysan
Cabin waa batari khafiif ah oo aluminium ah oo iPhone ku xira si birlab ah, oo bixiya dib-u-buuxin macquul ah
Kenu Airframe, waa kan ugu fudud uguna waxtarka badan gaariga haysta
Waxaan dib u eegnay shirkadda Kenu ee loo yaqaan 'Airframe', oo ah taageero weyn, si fudud oo ay u fiican tahay.
Sida loo tirtiro Aqoonsigaaga Apple oo loola xiriiriyo koonto kale oo email ah
Tirtir koonto emayl ah oo laxiriirta Aqoonsiga Apple kuna dar mid cusub, adoo xafidaya dhamaan iibsiyadaada.
Sida loo xakameeyo looxanka muusikada ee Siri
Siri wuxuu kuu ogolaanayaa inaad xakameyso dib u soo celinta barnaamijkeena "Muusigga" amarro / ficil yar oo fudud oo aan kuugu sheegi doono iPad News.
IPhone 128GB ah? Waxaa macquul ah mahad Mophie
Mophie wuxuu suuqgeyn doonaa kiis leh awood kaydineed oo dhan 64GB
Apple wuxuu sii daayaa macruufka 7.1.2
Nooca cusub ee macruufka 7.1.2 ee ay sii daayeen Apple
Sida loo beddelo su'aalahaaga amniga Apple ID
Waxaan ku baraynaa sida loo beddelo su'aalaha iyo jawaabaha koontada Apple, taas oo ah, Aqoonsiga Apple.
Misfit wuxuu bixiyaa barnaamij dhameystiran oo loogu talagalay 'Pebble smartwatch'
Kooxda Misift iyo Pebble waxay u soo bandhigeen codsi dhameystiran oo ku saabsan smartwatch
Sida loo Jailbreak Pangu ilaa iOS 7.1 iyo 7.1.1
Pangu, JAILBILAND loogu talagalay iOS 7.1 iyo 7.1.1 oo ka yimaada Shiinaha ayaa naga wada yaabiyey. Waxaan ku tusinaynaa talaabo talaabo ah sida loo Jailbreak leh Pangu.
Sida looga saaro kaararka amaahda iCloud Keychain
Waxaan ku baraynaa sida loo tirtiro xogta kaarka deynta ee ku taal iCloud Keychain, si looga hortago macluumaadka la xado ama wax khaldan oo dhacaya.
Xiriirka kubada cagta adduunka ee FIFA ayaa ka mamnuucaya ciyaartooyda inay xirtaan dhagaha dhagaha ee loo yaqaan Beats inta lagu guda jiro koobka adduunka
FIFA ayaa go’aansatay inay mamnuucdo adeegsiga dhagaha samaacadaha ee loo yaqaan 'Beats headphones' ciyaartooyda u tartameysa Koobka Aduunka heshiis ay la galeen Sony.
Barnaamijka beddelka xeedho ee bilaashka ah ee bilaashka ah ee bilaashka ah
Apple ayaa hada ku dhawaaqday inay ogaatay dhibaatooyinka qaar ka mid ah noocyada mootooyinka iPhone-ka ee lagu qaybiyo Yurub isla markaana lagu beddeli doono bilaash.
Apple waxay soo saartay barnaamijka beddelka xeedho ee iPhone
Apple waxay hadda bilowday barnaamij beddel ah oo loogu talagalay xeedho iPhone 5W, oo ah nooc lagu soo bandhigay moodooyinka iPhone 3GS, iPhone 4 iyo iPhone 4s.
Beats wuxuu ku dhajiyaa sameecadaha dhagaha ee Solo2 cusub iphone
Tan iyo markii ay Apple iibsatay Beats, weli maanaan arag waxa ay labada awood u leeyihiin wadajir. Hadda wanaaggu wuxuu ka bilaabmaa barta Solo 2 iyo iPhone.
Faraanti kaa digaya ogeysiisyada
Bilowga Ringly wuxuu ina soo bandhigayaa giraan caqli badan oo ku xiran iPhone-keena isla markaana awood u leh inuu ogeysiiyo wicitaanada soo socda, fariimaha iyo waxyaabo kale oo badan.
Kani waa cabsida iPhone 5s Mini ee laga sameeyay Shiinaha
Wax walba waxaa iska soo guuriyay Shiinaha. Xitaa wixii aan jirin, laakiin taasi suuqa, si fiican ayey u jiri kartaa. Tani waa fanka cusub ee leh iPhone 5s Mini.
Ma inaad ku iibsato fiilo danab ah oo aan shahaado haysan qiimaheeda?
Runtu waxay tahay in qiimaha hoose uu ka dhigayo fiilooyin danab aan shahaado lahayn, laakiin runti ma u qalantaa iibsigaaga?
Dhagax dixeedku wuxuu hadda noo oggolaanayaa inaan xakameyno mugga muusigeenna
Qalabka cusub ee loo yaqaan 'Pebble firmware' wuxuu noo ogolaanayaa inaan kordhino ama yareynno mugga muusikada
Razer Junglecat: ciyaarta loo yaqaan 'gamepad' ee u roga iPhone-ka 'Xperia Play'
Waxaan sii wadeynaa kahadalka qalabka mobiilka Apple. Xaaladdan oo kale waxaan u tixraacaynaa Razer Junglecat, oo ah gamepad u rogaa iPhone-ka Xperia Play.
IOS 8 ayaa noo oggolaan doonta inaan u isticmaalno iPhone-keena sidii kontoroollaha ciyaarta ee iPad ama Mac
IOS 8 waxay ku fidineysaa fursadaha ciyaarta iPhone-ka, kaas oo loo adeegsan karo xakamaysi ahaan
Netflix waxay xallin doontaa dhibaatada Dolby Digital 5.1 ee Apple TV
Dhaqaaqo, barnaamijka kuu sheegaya inta aad dhaqaaqeyso
Nolosha casriga ah (iyo arrimo kale) ayaa si tartiib tartiib ah hoos ugu dhigtay dhaqdhaqaaqa jirka iyo nolosha oo kordhay ...
Tile waa socda
Tile waa aalad yar oo aad ku xireyso alaabtaada si aad isaga ilaaliso inay lumiso.
Sida loo soo bandhigo sawirada iyo fiidiyowyada TV-ga Smart-ka ah oo aan lahayn Apple TV-ga iPad-keena leh iMediaShare
Haddii aan rabno inaan ku wadaagno waxyaabaha ku jira ipad-ka TV-ga qolka aan ku nool nahay oo aan leenahay Apple TV, waxaan isticmaali karnaa barnaamijka iMediaShare
Isbarbar dhig iPhone 6 iyo boosteejooyinka kale ee iPhone
Haddii aad ka mid tahay kuwa doonaya inay ogaadaan wax walba oo ku saabsan iPhone-ka cusub, maanta waxaan ku tusinaynaa iphone 6 qosol ah marka loo barbar dhigo boosteejooyinka kale ee iPhone.
Codadka Iphone-ka, waa xiddig remix ah [muuqaal]
Codsiga dhawaaqa loo yaqaan '' Aperture '', kaas oo aan ka heli karno dhammaan iphone-yada leh iOS 7, remix ahaan.
Waa maxay ikhtiyaarka ugu fiican ee lagu sameeyo Tethering-ka iPhone-ka?
Soo ogow habka ugu wanaagsan ee lagu adkeyn karo iPhone-kaaga ama iPad-ka oo aad ula wadaagto internetka aalad kale.
Sida wax walba loogu sawiro iPhone-kaaga
Tusmooyinka helitaanka sawirka ugu fiican xaaladaha maalinlaha ah.
MBLOK, xusuus leh Bluetooth 4.0 iyo 256GB oo la jaan qaada iPhone-ka
MBLOK, qeexitaannada iyo qiimaha xusuustaan ​​loogu talagalay iPhone oo leh Bluetooth 4.0 iyo 256GB oo keyd ah oo gudaha ah.
Muuqaallada ugu fiican ee loo yaqaan 'Pebble' (III)
Waxaan kuu soo bandhigeynaa xulasho cusub oo leh ilaalada ugu fiican ee smartwatch-kaaga Pebble.
Dareem la'aan waa buufin biyo-diid ah oo loogu talagalay iPhone-keena
Dareem la'aan waa buufin aan la arki karin oo leh waxyaabo super-hydrophobic ah 1000 jeer ka fiican timaha aadanaha.
Fritzframe waa kiis, xasiliyaha sawirka iyo waxyaabo kaloo badan
Kiiska fritzframe wuxuu ka samaysan yahay aluminium darajadiisu tahay 6061, waa khafiif qalin ahaan oo adag, waa natiijada naqshad taxaddar leh iyo soosaar xiiso leh oo Mareykan-Jarmal ah.
Vysk QS1, waa kiiska kaa difaacaya tuugada internetka
Vysk QS1, waa kiis ka dhigaya wax aan macquul aheyn dadka kale inay basaasaan isgaarsiintaada.
IPhone 4s wuxuu sii ahaanayaa "amiirka" Apple
Iibinta liidata ee iPhone 5c iyo luminta iPhone 5 waxay ka dhigan tahay in iibka iPhone 4s uu matalayo boqolkiiba wanaagsan wadarta iPhone.
Ka soo degso ePub bilaash ah bogagga internetka ee ugu wanaagsan
Ku soo dejiso buugaagta ePub BILAASH kuna dar iPad si fudud si aad ugu raaxaysato akhriska socdaalka. Websaydhada si loo soo dejiyo ePub.
Kala duwanaanshaha muhiimka ah ee u dhexeeya xeedho Ipadka asalka ah iyo mid been abuur ah
Laga soo bilaabo barta uu ku leeyahay Ken Shirriff, falanqayn dhammaystiran oo ku saabsan farqiga u dhexeeya xeedho hore oo Apple ah iyo mid la soo guuriyey Ipad-keena ayaa la daabacay.
Sida loo wareejiyo dhammaan xogtaada ka Android in macruufka
Casharkaan waxaan ku arki doonaa talaabo talaabo ah sida looga soo wareejiyo dhammaan xogtaada Android iyo macruufka. Sawirro, xiriiro, muusig iyo fiidiyowyo hal cashar fudud ah.
iStick, xusuusta USB oo leh isku xira danab
Noocyada 'iStick', oo ah xusuus USB ah oo la jaanqaadi kara iPhone-ka ama iPad-ka kuna qalabaysan isku-xiraha danabka
Bebop Drone, quadcopter-ka cusub
Macluumaadka iyo astaamaha Baqbaqaaqa Bebop Drone, quadcopter-ka cusub ee la jaan qaadaya iPhone iyo iPad oo ku rakiban kamarad 14 Mpx ah.
Sida loo isticmaalo Xarunta Xakamaynta markaad haysato kumbuyuutarka shaashadda ee iPhone-ka
Marnaba way kugu dhici kartaa adiga inaad isticmaasho Xarunta Xakamaynta markaad haysato kumbuyuutarka shaashadda, mana awoodi kartid maxaa yeelay waxay qaadataa wax walba. Maanta waxaan ku tusaynaa sida.
Apple waxay bilawday barnaamij kor loogu qaadayo iPhone-kaaga hore oo loo yaqaan 5S ama 5C
Apple ayaa bilowday barnaamij ay ku casriyayso iphone-kaaga iPhone 5S ama 5C cusub oo Mareykanka ah, iyadoo ka faa’iideysaneysa dadka isticmaala gunno wanaagsan.
Sida loo kiciyo codka ogeysiisyada riixitaanka ee Facebook ee loogu talagalay iOS
Maanta waxaan kuu sheegeynaa sida loo kiciyo codka ogeysiisyada Riix ee Facebook ee loogu talagalay macruufka haddii aad doorbideyso inaad yeelato cod marka lagu daro ogeysiiska garaafka.
Dhagax dixeedku wuxuu bilaabaa inuu iibiyo, si gooni gooni ah, fiilooyinka si loogu soo dallaco smartwatch-kaaga
Dhagax dixeed wuxuu bilaabaa inuu si gooni ah u iibiyo fiilooyinkiisa saacadaha ku shaqeeya
Sida loo keydiyo khariidadaha si loogala tashado khadka tooska ah arjiga khariidadaha Google 3.0
Cusboonaysiinta cusub ee Khariidadaha Google ayaa horeba noo oggolaanaysa inaan karti u yeelano inaan kaydin karno aaladahayaga markii aan u baahanno iyadoon lahayn xiriir
IOS Mail ma qarinayso lifaaqyada emaylka
Arrin amni oo daran ayaa saameysa iOS 7, barnaamijka boostada ee asalka ah kama qarinayo lifaaqyada emaylka sida la xaqiijiyay.
Sidee loo ogaadaa haddii iCloud ama adeeg kale oo Apple ahi uu shaqeynayo?
Haddii aadan ku xirmi karin barnaamijka Apple sida iCloud oo aadan hubin inuu hoos u dhacay ama haddii ay wax ka khaldan yihiin iPhone-kaaga, maanta waxaan kuu sharraxeynaa sida loo sameeyo.
Quickdraw Cable - Fiilo Xadhig Magnetic Bedelaad ah
Haddii aan mar hore idin baray sida loo sharad on fiilooyinka amraya iPhone aan rasmi ahayn. Maanta waxaan ka hadleynaa Quickdraw Cable; danab birlab ah
Buundada; kiis iPhone ah oo soo bandhigaya ogeysiisyada dhabarka
Kickstarter waa goob aad u wanaagsan oo laga helo mashaariic hal-abuur leh. Maanta waxaan ka hadlaynaa Lunecase; kiis iPhone ah oo muujinaya ogeysiisyada dhabarka.
Sida loo dhigo iPad-kayga Habka Nabdoon loona hagaajiyo khaladaadka Cydia
Ma dooneysaa inaad tirtirto waxyeello u geysatay qalabkaaga oo aadan daari karin iPad-ka? Gali Nidaamka Nabdoon oo tirtir codsiyada aad rabto
Sida loo joojiyo si toos ah fiidiyowyada fiidiyowga ee Facebook ee loogu talagalay iPhone ee ka hooseeya 3G ama LTE
Tilmaame si aad u joojiso si toos ah fiidiyowyada loo adeegsado ee ku jira barnaamijka Facebook ee loogu talagalay iPhone iyo iPad, keydinta batteriga iyo heerarka xogta.
Dib-u-eegida Creative Muvo 20 iyo Sound Blaster AXX200 kuwa ku hadla wireless
Waxaan ku tijaabinay ku hadlayaasha cusub ee Creative-ga iPhone-ka, oo leh awood batteri si aad ugu isticmaali karto meel kasta.
Dhagaxaantaada Isbaanishka iyo jilayaasha Emoji
Shirkado cusub oo wata liiska Pebble ee Isbaanishka kuna habboon jilayaasha Emoji
Sida Apple u (u Waajihi karo) inuu u hagaajiyo keydkiisa macruufka 8
Kumbuyuutarka iOS 8 waa la hagaajin karaa isla markaana furaha wareejinta ayaa ka mid ah hagaajinta ay tahay inay Apple ku hirgeliso cusbooneysiinta mustaqbalka.
Miyuu batteriga ka daadanayaa macruufka sareeya marka la xirayo codsiyada?
Is-maamul-u-sameynta iPhone-ka ayaa ah arrin walwal nagu haysa. Si kastaba ha noqotee, marka laga hadlayo iPhone, xiritaanka codsiyada ee asalka waxay noqon kartaa daaweynta ugu xun.
Sida loo sameeyo iPad-kaaga si dhaqsiyo badan adiga oo aan jailbreak
Haddii aadan jeclaan jailbreaking aad iPad, halkan waxaa ku jira qaar ka mid ah tabaha si loo dedejiyo qalab aad aan jailbreaking.
Apple Care ma u leedahay iPhone iibsashada?
Haddii aad dhawaan iibsatay iPhone-ga oo aadan hubin haddii aad ku buuxinayso dammaanadda Apple Care, maanta Actualidad iPhone ayaan kaa caawin doonaa.
[Tutorial] Sidee looga soo ceshan karaa xogta la tirtiray qalabkaaga iOS
Dhamaanteenba way nagu dhacdaa in markasta oo badan aan tirtirno wax aanan dooneyn, maanta waxaan ka hadli doonaa barnaamij lagu soo kabanayo xogta la tirtiray ee iOS.
Si toos ah uga muuji sawiradaada iPhone-gaaga 'Mimento'
Mimento waxay kuu ogolaaneysaa inaad ku horumariso sawiradaada si raaxo leh, iPhone-kaaga, oo aad ku hesho guriga iyadoo ay ku jiraan kharashka dhoofinta.
Muuqaallada ugu fiican ee loo yaqaan 'Pebble' (II)
Isugeynta 7 waji-daawasho loogu talagalay smartwatch ee Dhagax-shiidka.
Dib u eegis ku saabsan birta cusub ee loo yaqaan 'Pebble Steel'. Smartwatch-ka ugu fiican ayaa hadda ka qurux badan.
Smartwatch-ka xilligan ayaa shaki la’aan ah Dhagax dixeed. La jaanqaadi kara macruufka iyo Android, hadda waxay hagaajineysaa naqshadeynta iyo tayada agabyada leh Birta Dhagax.
U soo dejiso sawirada WWDC 2014 ee iPhone ama iPad-kaaga
Soo dejiso waraaqaha Apple ee WWDC 2014 ama waraaqaha sawirada ee iPhone, iPad, iPod Touch
Cayayaanka ku jira macruufka 7.1 wuxuu kuu oggolaanayaa inaad joojiso Find My iPhone
Cayayaanka ayaa ka soo muuqday macruufka 7.1 kaas oo aad ku joojin karto shaqada Raadi My iPhone iyo iCloud isla waqtigaas
AnyTones, ka sameyso taleefankaaga taleefankaaga iphone (Cydia)
AnyTone waa codsi cusub oo laga heli karo Cydia kaas oo kuu ogolaanaya inaad ka samaysatid taleefannadaada taleefankaaga iphone-ka.
Sphero SelfieBot: selfie-ka aan waligiis jiri jirin
Haddii aad jeceshahay sawirada iswada oo aad u jeceshahay aalado, waxaan heysanaa xalka ugu fiican. Saas ma aha, iyagu way haystaan, maxaa yeelay qalabka Sphero SelfieBot waa labadaba.
Waxyaabaha la furay waxay bilaabayaan mitirka cadaadiska dhiigga ee Bluetooth
Shirkadda Theings waxay iibisay mitirkeeda xiisadda wireless-ka ee aaladaha mobilada iyo iOS
Sida loo helo tilmaamaha hagidda GPS ee ku saabsan Dhagaxaantaada
Isticmaalidda saacaddaada Dhagaxleyda si aad u hesho tilmaamaha hagidda GPS-ka ayaa suurtagal u ah barnaamijyada laga heli karo App Store.
Ma rabtaa mikroskoob 800x ah ee iPhone-kaaga? Kickstarter ayaa kuu fududeynaya adiga
Haddii aad raadineyso microscope-gaaga iPhone-ka, Kickstarter MicrobeScope wuxuu ku siinayaa muraayadaha 800x si aad xitaa u qabato bakteeriyada.
Doonta raaxada ee Steve Jobs ayaa lagu arkay dalka Mexico
Doon weyn (doon dhererkeedu yahay 78 mitir) oo uu dhisay Steve Jobs ayaa maalmahan lagu arkayay deked ku taal Mexico.
Abuur fayl ku dhex jira fayl-ka macruufka 7.1 (Tabobar)
Cayayaan laga helay macruufka 7.1 iyo noocyadii hore ee macruufka 7 wuxuu noo ogolaanayaa inaan galino galka fayl gudahooda.
15 talooyin oo lagu kordhinayo batterigaaga iPhone
Ka dib talooyin dhawr ah ayaa fidin kara noloshaada batteriga ee iPhone 15 ilaa 30 boqolkiiba ama xitaa ka sii badan. Tijaabi mid ka mid ah kuwan oo noo sheeg khibradaada.
Sida loo hubiyo iibsashada lagu sameeyay aqoonsigaaga Apple ee iTunes
Casharkaan yar waxaan ku bari doonaa inaad ogaato taariikhda iibsiga lagu sameeyay Aqoonsigaaga Apple-ka kombiyuutarkaaga oo wata iTunes
5Gb iPhone 8c wuxuu bixiyaa 3Gb kaliya wax kayar 4Gb Galaxy S16
5Gb iPhone 8c wuxuu bixiyaa ku dhowaad 5Gb oo awood bilaash ah, 8,5Gb oo uu bixiyo 4Gb Galaxy S16.
5 sababood oo been ah si loo sharaxo fashilka mustaqbalka ee iPhone 6
Xanta ku saabsan iPhone 6 ayaa sii kordheysa, runtuna waxay tahay in kuwa wax lihi ay mar horeba soo saaraan tan ugu xun ee Apple iyaga oo saadaaliyay guuldarada. Maanta, ayaynu dib u eegaynaa.
Nidaamka indhaha ee siyaada ah ee loogu talagalay iPhone-ka $ 90
Haddii aad ka shakisan tahay in iPhone-ku uu noqon karo kaabe caafimaad, waa inaad ogaataa nidaamka indhaha ee loogu talagalay iPhone-ka Jaamacadda Stanford.
Xarunta ogeysiinta ee macruufka waa muuqaal aad u anfacaya haddii aad taqaanno sida loo adeegsado waxaana tilmaamahan aan ku bari doonaa sida ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo.
Waxaan ku tusineynaa waxoogaa tabaha yar yar ah si aad ugu cadaato batterigayaga ugu badnaan iOS 7.1
Xalliyaan arrinta mar walba ku saabsan geolocation-ka ee macruufka 7.1
IOS 7.1 waxay la timaaddaa dhibaato la xiriirta dhul-bixinta, maaddaama astaanta ay si joogto ah usii socoto. Waxaan ku baraynaa sida loo hagaajiyo.
Sidee loola macaamilaa iPhone dhaqdhaqaaqyada madaxa
Tilmaam si aad u xakameyso iPhone-ka adiga oo jimicsi ku sameeya madaxa, mid ka mid ah tabaha ugu fiican ee loogu talagalay iOS 7.
Pioneer inuu sameeyo raadiyaha baabuurta ee ku habboon CarPlay
Maanta MacRumors ayaa soo warisay, shirkadda korantada ee Pioneer waxay ka shaqeyneysaa sameynta raadiyayaal ku habboon CarPlay gawaarida badan.
Taxaddarrada ay tahay inaad sameyso si aad uga fogaato inaad lumiso JAILBREAK
Saddex tilmaamood oo fudud si loo xaliyo cilladaha suurtagalka ah oo aan lumin macruufka 7 Jailbreak
Maxay tahay sababta Apple aysan u sii deynin iPhone 6 bisha Juun?
Waxaa jira warar badan oo xan ah oo ku saabsan soosaarka la filayo ee IPhone-ka cusub, laakiin maanta waxaan ku lafagureynaa suuqa sababta aysan Apple u billaabin iPhone 6 bisha Juun.
IOS 7.1 xiriiriyeyaasha soo dejinta ee dhammaan aaladaha
Waxaan kuu soo bandhigeynaa xiriiriyeyaasha tooska ah ee soo dejinta ee nooca cusub ee iOS 7.1 ee loogu talagalay dhammaan qalabka la jaan qaada.
Sida loo arko metadata ee sawirada lagu qabtay iPhone-kaaga
Casharradan kooban waxaan ku falanqeyn doonnaa sida loo arko metadata sawirrada aad ku qabatay iPhone-kaaga.
Sida loo dejiyo lambarka sirta ah ee lambarkaaga 'iPhone'
Maanta Actualidad iPhone ayaan mar kale uga hadlaynaa casharrada waxaanuna ku tusinaynaa tallaabo tallaabo ah si aad u awood ugu yeelatid lambarka sirta ah ee kumbuyuutarkaaga iPhone-ka
Dib-u-eegista Fiidiyowga: Galileo, oo ah qalab loogu talagalay iPhone-keena oo adeegsad badan leh
Galileo: dib u eegista iyo falanqaynta muuqaalka
Kani waa Wello, oo ah "caafimaadka ugu fiican" daboolka halkaas
Wello waa kiis iPhone ah oo duubi doona dhammaan arrimaha la xiriira caafimaadka dadka isticmaala iyada oo loo marayo afar dareemayaal yaryar.
Dhibaatooyinka fiilooyinka hillaaca
Isku xiraha hillaaca Apple wuxuu la kulmayaa dhibaatooyin aad u daran sababo la xiriira xirashada xad dhaafka ah taas oo ay sababi karto isku xirnaanta gudaha oo muujineysa daxal
Noocyada qaabeynta ee iPhone-kaaga
Noocyada qaabeynta waxay siinayaan maamulayaasha nidaamka si dhakhso leh oo loogu hagaajiyo iPhone si ay ula shaqeeyaan nidaamyada macluumaadka ee ganacsi, dugsi, ama urur kasta.
Sida loo beddelo naanaysta Xarunta Ciyaarta ee iOS 7
Game Center waa shabakad yar oo bulsheed oo loogu talagalay ciyaaraha Apple ay u diyaariso dadka isticmaala. Laakiin magaca isticmaale miyaa la beddeli karaa? Dabcan!
Dhibaatooyin batari ah ma ku haysaa macruufka 7.0.6 Halkan waxaa ku yaal xalka suurtagalka ah
IOS 7.0.6 waxay la timid cillad suurto gal ah oo keenta in qalabku isticmaalo batteri badan oo kuleyl badan la kulmo, laakiin tani waa xalka suurtogalka ah.
Oral-B wuxuu ku soo bandhigayaa caday caqli badan MWC 14
Shirkadda Oral-B waxay soo bandhigtay cadayga SmartSeries 7000 ee gacanta ku haya cadayga oo maalin walba talo ka siiya.
16 GB xasuusta kaydinta ma ku filan tahay iPhone?
In kasta oo Apple ay ku sii socoto khadka 16GB ee taleefannadiisa casriga ah, laakiin xusuusta keydka isticmaalaha ee tusaalahaas runti waa mid aad u yar.
Maamulaha ciyaarta fiidiyowga cusub ee iPhone-ka oo la mid ah Xbox-ka
Xakamaynta CTRLi ee ay abuurtay shirkadda caanka ah ee MAD Catz ayaa lagu soo bandhigaa MWC, oo la mid ah kantaroolaha Xbox laakiin waxay ku dareysaa taageero iPhone ah.
Muhiimadda cusbooneysiinta ee iOS 7.0.6 iyo iOS 6.1.6
Waa muhiim in la cusbooneysiiyo macruufka 7.0.6 ama iOS 6.1.6 kiiskaaga, cillad dhanka amniga ah oo muhiim ah oo la socota shahaadooyinka SLL iyo TLS ee shabakadaha shabakadda.
Sida loo JAILBREAK macruufka 7.0.6 talaabo talaabo leh Evasi0n
Waxaan kuu sharaxeynaa talaabo talaabo ah sida wax looga bedelayo Evasi0n si ay ula jaan qaado macruufka 7.0.6, waxaanan ku siineynaa xiriiro soo degsiimo oo ah dalab horey loo badalay
Hadda waad ka hawlgelin kartaa xaqiijinta laba-tallaabo ee Apple gudaha Spain. Wax walba waan kuu sharxeynaa.
Nidaamka amniga ee "xaqiijinta laba-tallaabada ah" ee Apple ayaa hadda laga heli karaa Spain. Waxaan kuu sharraxeynaa waxa ay tahay iyo sida loo qaabeeyo.
Sida loo soo cesho iPhone, iPad ama Mac lumay ama la xaday.
Raadinta iPhone-kaaga, iPad-ka iyo iPhone-kaaga kaa lumay ama lagaa xaday waxay suuragal ku noqon kartaa ikhtiyaarka ah "Raadi iPhone-kayga"
Haddii badhanka Guriga ama badhanka Awoodda ee iPad-kaaga uusan shaqeyn oo aad rabto inaad shaashadaha ka qaado, waxaad isticmaali kartaa qalabka IOS: AssistiveTouch
Haddii aad u maleyneyso in iPhone-kaaga aan la jabsan karin, ka fikir markale
Markii ay Apple soo saartay barnaamijkeeda iOS 7 sanadkii 2013, shirkadda Symantec waxay ogaatay 70 cilladood. In kasta oo nuglaantaasi aysan had iyo jeer u dhigmin hanjabaado, haddana waxaa iska cad in macruufka (iOS) uu ka fog yahay lama-taabtaanka.
Miyuu batteriga iPhone si dhakhso leh u qaadaa haddii Habka Diyaaradda la isticmaalo?
Maanta waxaan ogaaneynaa haddii mid ka mid ah quraafaadka internetka uu run yahay. Waxaan la yaabanahay haddii ay run ahaantii ku dallacdo batteriga iPhone si dhakhso leh haddii Diyaaradda Mode loo isticmaalo.
Waxaan tijaabinay Chargekey, oo ah xarigga ugu yar adduunka ee danab
Dib u eegis iyo falanqeyn ku saabsan Chargekey, oo ah xarigga danabka ugu yar adduunka
My iPhone ayaan ka jawaabin ama daarin
Haddii iPhone-kaaga uusan ka jawaabin, ha ka welwelin, ka hor intaadan u qaadin Apple waxaa jira dhowr geeddi-socod oo aad isku dayi kartid inaad adigu wax ka qabato dhibaatada naftaada, waxaan rajeynayaa inay caawineyso.
Caadooyinka xun ee leh iPhone
Soo koobitaan ku saabsan caadooyinka xun xun ee milkiilayaasha iPhone-ku leeyihiin oo noloshooda ku soo afjari kara si ka dhakhso badan sida aan jeclaan lahayn oo aan awoodi karno
3 sababood oo ah shaashad weyn iPhone 6 waa ganacsi weyn Apple
Waxaan ka wada hadalnay hadalada xanta ah ee iPhone-ka ah waxaanan ku biirnay 3 sababood oo shaashad weyn oo iPhone 6 ah ay u tahay heshiis wanaagsan.
WhatsApp ee iOS 7: sida loo qariyo waqtiga isku xirnaanta ugu dambeysa
Waxaan sii wadeynaa inaan kahadalno khiyaanooyinka kujira baloogkeena kiiskan waxaan kuu sheegi doonaa sida loo qariyo waqtiga xiriirka ugu dambeeya ee WhatsApp ee iOS 7
Sida logu turjumo miisaskaaga Pebble isbaanish
Waxaan ku tusineynaa sida aad ugu tarjumto liiska menubkeena Pebble Spanish si aad ugu mahad celiso qaar ka mid ah firmwares wax laga badalay.
Sida loo Dhoofiyo iPhone Xiriir Isticmaalka iCloud
Haddii aad beddeleyso boosteejadaada moobiilka, ama aad rabto inaad u qaadato xiriiradaada iPhone taleefan labaad, maanta waxaan kuu sheegaynaa sida loo sameeyo tallaabo tallaabo leh iCloud.
Muujinta fiidiyowga ee iska caabinta shaashadda safayr
Iyada oo la hayo caddeyn sii kordheysa oo ah in Apple qorsheyneyso inuu ku beddelo Gorilla Glass oo leh safayr si loo ilaaliyo shaashadda iPhone 6, waxaa xiiso leh in la arko fiidiyow muujinaya sida ay u adkeysanayaan maaddadan inay xoqdo.
Muuqaallada ugu fiican ee loo yaqaan 'Pebble'
Waxaan soo xulnay afar ka mid ah waardiyeyaasha ugu fiican ee aad ku dari karto Dhagaxaantaada
Dhagax dixeed 2.0 ayaa hadda lagu heli karaa Appstore u gaar ah iyo astaamo cusub
Dhagax dixeed 2.0 ayaa hadda loo heli karaa macruufka, oo leh keydkiisa dalabyada, mawduucyadeeda saacadda iyo shaqooyinka cusub ee ay qalabka cusub ee 'smartwatch' ku darayaan
CleverPin wuxuu noo ogolaanayaa inaan isticmaalno koodhka qufulka kaliya markaan u baahanahay (Cydia)
Jaangooyadaani waxay noo oggolaaneysaa inaan shaqeyno oo aan dhaqaajino koodhka qufulka markii la doono iyada oo ay ugu wacan tahay xulashooyinka ay na siiso.
Nidaamka ilaalinta guriga ee iSmartAlarm wuxuu isu diyaarinayaa inuu soo galo Midowga Yurub
Nidaamka ilaalinta guriga, oo ay xukumaan iPhone iyo gabi ahaanba fur-iyo-ciyaar. Lacag la'aan ama qandaraasyo la'aan, waxaad bixineysaa alaabta, waad la qabsaneysaa wayna shaqeyneysaa. Kacaan.
Urka Mac cusub ee la furay, oo laga sameeyay cadar
Taasi waa sax, shirkad Faransiis ah ayaa loo xilsaaray inay abuurto caraf udgoon u ah MacBook Pro cusub.
Kanex Multi-Sync Keyboard, kiiboodhka isku xira Mac, iPad iyo iPhone
Kiiboodhka Kanex Multi-Sync Keyboard waa kumbuyuutar kumbuyuutar oo ballaadhan oo buuxa (oo ay ku jiraan shabakadda lambarka dhinaca) oo lagu xidhi karo aalado badan.
Waa maxay isbeddelada Cydia ee Saurik rakibay?
Saurik wuxuu ka jawaabayaa su'aalaha dhowr isticmaale oo ku saabsan Cydia tweaks oo uu ku rakibay aaladdiisa
Moshi wuxuu soo bandhigayaa Kiiska SenseCover ee iPhone
Moshi ayaa maanta soo bandhigtay kiis cusub oo iPhone ah oo loo yaqaan 'SenseCover'. Daboolka cusub waxaa lagu gartaa inuu na siinayo marin toos ah macluumaadkayaga oo leh shaashad yar oo hore.
Sida loo soo cesho xusuusta iPhone-kaaga adiga oo tirtiraya hadhaaga barnaamijka
Qeybteena casharrada iPhone-ka waxaan ku baraneynaa inaad u adeegsato kheyraad xiise u leh kombiyuutarada si aad ugu soo ceshato xusuusta adoo tirtiraya qashinka
LaCie Fuel, 1TB Wireless Hard Drive-ka loogu talagalay iPhone-kaaga
Ku dar 1TB oo karti u leh macruufkaaga iyo iswaafajinta ay la leedahay AirPlay waxaad si fudud ugu wareejin kartaa filimada shaashadda weyn Apple TV.
10ka ugu sareeya ee tilmaamaha ugu waxtarka badan ee ku saabsan macruufka
Qaar ka mid ah dhaqdhaqaaqyada ugu waxtarka badan ee aan ku dari karno shaqadeenna iPhone-ka iyo runtiina waxay dedejinayaan dhaqdhaqaaqayaga u dhexeeya barnaamijyada kala duwan.
Sida looga saaro lambarrada shaashadda qufulka ee 'iPhone' ee loo yaqaan 'SimplePasscodeButtons' (Cydia)
Haddii aadan rabin lambar ama xarfo in lagu arko kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee iPhone, waa inaad raacdaa casharradan fudud ee loo yaqaan 'SimplePasscodeButton tweak'
Sida loo sameeyo barnaamijyo aan la arki karin oo ku saabsan iPhone bilaa JAILBREAK
Haddii aad had iyo jeer rabto inaad lumiso aragtida barnaamijka ku saabsan iPhone, fiiro gaar ah u yeelo, maxaa yeelay maanta waxaan kuu sheegeynaa sida loo sameeyo barnaamijyada aan la arki karin iPhone-ka oo aan lahayn JAILBREAK.
Kiiska Incipio Cashwrap ayaa kuu oggolaanaya inaad ku bixiso iPhone-kaaga adoo adeegsanaya NFC
Cashwrap, kiiska Incipio kaas oo u oggolaan doona bixinta tikniyoolajiyadda NFC iPhones. Waqtigan xaadirka ah waxaa loo isticmaali karaa adeegsadayaasha AT&T, laakiin waa tallaabo horay loo qaaday isticmaalka.
Zoom iQ5, oo ah makarafoon yar oo xirfadle ah oo ku xidha Danabka
Zoom iQ5 waa makarafoon isdabajoog ah oo qalabka wax lagu dhejiyo ee macruufka ah ee ku xirma hillaaca Waxay shaqeysaa farsamo wareeg ah oo u gaar ah, oo u oggolaaneysa duubista codka ee jihada bidix ee midigta jihadeedka, ha ahaato muuqaal ama muuqaal muuqaal ah.
SmartWatch + ka faa'iideyso kartida Dhagaxaantaada
SmartWatch +, oo laga helo App Store, ayaa fursado badan siiya isticmaaleyaasha Pebble.
Sida loogu daro qaamuusyo cusub macruufka 7
Waxaan ku tusineynaa xeelad fudud oo ku saabsan sida loogu daro qaamuusyada ku jira iOS 7 kaas oo lagu xallinayo shakigaaga ku saabsan luqadaha iyo qeexitaannada Isbaanishka.
Sida loo beddelo batariga iphone 5
Haddii aad sharad ku sameyso naftaada marka ay timaado inaad bedesho batteriga IPhone 5-gaaga iyo inaad lacag keydsato, waxaan ku tusineynaa cashar talaabo talaabo ah oo ku saabsan sida loo sameeyo
Barashada Cydia: baro sida loo maareeyo dukaanka Jailbreak
Waxaan ku siineynaa cashar ku saabsan Cydia, oo leh shaashado iyo fiidiyoow sharraxaad leh oo aad ku arki karto astaamaha iyo shaqooyinka ugu muhiimsan.
Macaamiisha Apple maahan macaamiisha ugu qanacsan
Macaamiisha Apple ayaa ugu qanacsan. Daraasad ay sameysay Forrester Research ayaa muujineysa in Samsung, Microsoft iyo Sony ay Apple kaga fiicnaadeen qanacsanaanta macaamiisha sahan la sameeyay 2014.
U isticmaal kontoroolkaaga PS3 sidii koontaroole iPad-kaaga ama iPhone-kaaga
Haddii aan haysanno kantaroole PS3 hadda kadib ma lihin caqabad aan ku raaxeysan karno ciyaaro la jaan qaadi kara kantaroolayaasha MFI ee ku jira iPad-ka ama iPhone-ka
Wax badan ka soo saar Dhagaxa aad ugu mahadsantahay Cydia
Waxaan ku tusineynaa seddex codsi oo Cydia ah oo waxtar badan u leh kuwa haysta smartwatch Pebble
Tabobar: la ciyaar kantaroolaha PS3 iyo iPhone ama iPad (Jailbreak)
Ku ciyaarida kulamada aad ugu jeceshahay iPhone-kaaga iyo iPad-kaaga kantaroolaha PS3 hadda waa run. Waxaan sharaxeynaa sida loo sameeyo.
Macruufka 7 miyuu kugu dhacaa badanaa? Ku soo hel sababta keentay shilka xeeladdan
Trick si loo ogaado loona xalliyo cillad soo wajahday macruufka 7 ee sababa iPhone, iPad ama iPod Touch inuu laalaado ama dib u bilaabo
Polaroid wuxuu soo bandhigayaa kamaradiisa waxqabadka ee XS100i cusub
Xallinta qeexitaanka sare, WiFi, wareejinta otomaatigga ah, muraayadaha indhaha ee biyuhu xiraan ama aadka u ballaaran yihiin. Kaamirooyinka cusub ayaa loogu talagalay cayaaraha iyo dadka wax jecel.
Xulo smartwatch-gaaga oo buuxi iPhone-kaaga
Liiska smartwatches for iOS ee aan hadda ka iibsan karno suuqa. Ikhtiyaar lagu dhammaystiro faa'iidooyinka qalabkeenna.
Sida dib loogu rakibo meelaha sida khaldan loo tirtiray ee Cydia
Dib-u-dhigidda dib-u-dhigista meelaha sida khaldan loo tirtiray waa sahlan tahay waxaana laga samayn karaa Cydia saddex tallaabo oo sahlan.
Sida loo wadaago xiriirada kalandarkaaga iyo qoraalada adoo adeegsanaya iMessage
Isku-darka nidaamka fariimaha ee iOS, iMessages, wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka soo dirto xiriirada ajandahaaga dhowr jeer oo aad u dirto qofkii aad rabto
Muraayadaha 'Moment' on Kickstarter, sawir xirfad leh oo leh iPhone
Bogga Kickstarter, mashruuca muraayadaha 'Moment' ayaa u muuqda, qalab loogu talagalay in sawirro xirfadeed lagu qaato iPhone-keena oo wata 2 lenses.
Waxaan ku tusineynaa sida ay u shaqeyso Awoodda Ubaxa
Awoodda Ubaxa ee lagu muujiyey hawlgalka CES 2014
Sida loo xiro dhammaan tabaha Safari hal mar macruufka 7
Trick si aad u xirto dhamaan tabyada aan ku furanayno Safari ee macruufka 7 isla waqtigaas, adiga oo aan lahayn JAILBILAX iyo qaab aad u fudud oo aad ugu mahadsantahay casharkaan.
Sida loo abuuro ringtones iPhone-ka GarageBand
Haysashada heesaha iPhone-ka ma sahlana, laakiin maanta waxaad baran kartaa sida loo abuuro codadka iphone-ka ee GarageBand
Sida loo dhaqaajiyo Taabashada Caawinta ee iPhone
Baro sida loo kiciyo Assistive Touch ee iPhone-ka si loogu daro badhanka guriga taabashada ee iPhone-kaaga iyo toobiyeyaasha kale adigoon adeegsan badhanka guriga.
Jaakada Jaallaha ah, kiis iPhone ah oo yaaban
Jaakada Jaallaha ah, kiiska iPhone-ka ee leh dhadhan yar oo is-difaac ah. Xusuusin: hubkan waa ka mamnuuc Spain.
Jijin raadinta waxqabadka LG waxaa loo yaqaan LifeTouch
Soo saaraha alaabta elektarooniga ah LG, wuxuu soo bandhigayaa jijimadiisa LifeTouch. Waa siyaado leh shaashad OLED oo ku habboon nidaamka macruufka.
Toddoba sano ka hor, Steve Jobs wuxuu na baray iPhone-kii ugu horreeyay
Maanta toddobo sano ka hor Steve Jobs wuxuu dunida ku soo bandhigay iPhone-ka, aaladda bedeshay taleefanka iyo warshadaha.
Sida loo beddelo codka fariinta WhatsApp ee mid la soo dejiyey (Jailbreak)
Waxaan ku tusineynaa sida loogu daro codadka gaarka ah ee codadka WhatsApp mahadnaqa Jailbreak
JUMP, laga yaabee inuu yahay xeedho jeebka ugu fiican ee iPhone-keena
Kickstarter waxaan kaheleynaa shey cusub oo wata magaca JUMP, kaas oo noo ogolaan doona inaan qalabkeena ku qaadno cabir yar.
Favi Pico +, borojektar la qaadan karo oo wata batari iyo taageero AirPlay
Favi Pico +, oo ah borojektar la qaadan karo oo leh waxqabadka AirPlay iyada oo loo marayo Wi-Fi, ayaa lagu soo bandhigay CES si aad ugu raaxeysan karto waxyaabaha ku jira warbaahinta badan ee iPhone-kaaga.
Kiiska FLIR One wuxuu u rogayaa iPhone-kaaga kamarad sawir-qaade kuleylka leh
FLIR One, kiiska kaamerada sawir qaadista kuleylka. Waa kamarad u oggolaanaysa aqris fara badan waxaana la heli doonaa guga. Adeegsiga shaqsiyeed iyo mid xirfadeed.
Mophie wuxuu soo bandhigayaa kiiskiisa cusub: kordhin batteriga iyo keydinta iPhone-kaaga
Mophie ayaa ku soo bandhigtay xarunteeda cusub ee kiisaska iPhone-ka xarunta CES ee Las Vegas, kuwaas oo leh batteriga iyo keydinta.
Aura, oo ah nidaam kormeer hurdo caqli leh
Aura wuxuu ka kooban yahay aaladda iftiinka deegaanka, dareeraha hurdada, iyo barnaamij. Dhammaan waxaa loogu talagalay in lagu xakameeyo lana xoojiyo khibradda hurdada.
Jijin lagu qiyaaso Polar Loop, oo loogu talagalay cayaaraha
Jijin lagu qiyaaso Polar Loop, oo loogu talagalay cayaaraha.
Baqbaqaaq MiniDrone iyo Jumping Sumo, oo ah qalabka cusub ee ay ku ciyaaraan macruufka
Baqbaqaaq MiniDrone iyo Baqbaqaaqda Boodida Sumo waa laba alaab-tooy oo cusub oo aan fog ka xakameyn karno iPhone ama iPad
SteelSeries Stratus, waa meel kale oo fog oo loogu talagalay iPhone-ka la jaan qaada macruufka 7
SteelSeries Stratus waa macruufka kale ee macruufka ah ee macruufka ah ee adeegsadayaasha iPhone, iPad ama iPod Touch si ay ugu raaxaystaan ​​ciyaaraha ay jecel yihiin.
Snooperscope, aragtida habeenkii ee iPhone
Snooperscope waxay u oggolaaneysaa macruufka iyo aaladaha Android inay ku arkaan mugdiga, waxay leedahay howlo fara badan oo la ogaan karo inta la isticmaalayo.
Sidee loo waafajiyaa toobiyeyaasha macruufka iOS 7 iyo OS X Mavericks?
Tabaha gaagaaban ee kumbiyuutarka ee iOS iyo OS X Mavericks waa la waafajin karaa; Sidaa darteed, haddii aan ku haysanno toobiye iPad-ka waxaan sidoo kale ku haysan doonnaa Mac-geyna
Sida loo arko magaca qaataha oo buuxa iMessage
Mashruucan waxaan ku baran doonaa sida loo dhigo magaca buuxa ee qaataha iMessage midig korkiisa sheekadooda.
Sida hadiyad loogu siiyo iphone si kadis ah
Maanta waxaan kuu keenaynaa qaab xoogaa xiiso leh oo aad ku qarin karto iPhone-ka hadiyad kale si aad uga yaabiso qofka qaata.
Whited00r waxay keeneysaa iOS 7 qalab casri ah
Whited00r waxay ku siineysaa suurtagalnimada inaad ku raaxeysato sharraxaadda iyo shaqooyinka macruufka 7 ee ku saabsan iPhone-kaaga hore
U habee iPad-ka si aad ugu dhaafi karto kuwa yaryar
Dejinta iPad-ka si aan ugu dhaafno carruurteenna waa mid aad u fudud. Waxa ugu badan ee aan ka walwalsan nahay waa ka ilaalinteeda qulqulatada suurtagalka ah, tuurista ...
Substrate Mobile Mobile Fix, xalka ku meel gaarka ah ee Substrate Mobile
Xal cusub oo loogu talagalay dhibaatada Substrate-ka Mobile-ka ee loo yaqaan 'Evasi0n 7' ayaa hadda la heli karaa illaa inta cusboonaysiinta rasmiga ahi ka soo baxayso
Sida loo helo codsiyada Cydia inay shaqeeyaan
Sababtoo ah Substrate-ka Mobiladu wali lama jaanqaado Evasi0n 7, codsiyada Cydia ee aan rakibno mararka qaarkood way joojiyaan shaqada. Waxaan sharaxeynaa sida loo xaliyo.
Ku beddel astaanta wadaha Zeppelin (Cydia)
Zeppelin wuxuu naga caawinayaa inaan si fudud ugu bedelno astaanta hawlwadeenka IPhone-keena
Waxaan tijaabinay OCGlass (ilaaliyaha shaashadda muraayadda) iyo ilaaliyaha alwaaxa dambe ee iPhone 5 iyo 5s
Tag Mic by Samson, makarafoonka lagu duubo Podcasts
Go Mic waxaa loogu talagalay in lagu duubo dusha sare ee kombiyuutarka, iPad ama iPhone shaashadda, laakiin wuxuu si buuxda ugu shaqeynayaa istaaggiisa.
Unlimtones, ka soo dejiso ringtones ama SMS ka iPhone (Cydia)
Unlimtones, codsiga kuu ogolaanaya inaad kala soo baxdo wax ringtone ama SMS ah, wuxuu horeyba ula jaan qaadayay macruufka 7. Waxaa laga heli karaa Cydia.
P0sixspwn waa la cusbooneysiiyay si loogu saxo cilladaha aan la qaban ee iOS 6.1.3 iyo 6.1.5
p0sixspwn, xirmada Cydia ee kuu oggolaaneysa inaad ka beddesho Jailbreak-kaaga isku-xirnaanta iyo baaritaanka, ayaa la cusbooneysiiyay qaab deggan oo aan cayayaan lahayn.
Xalka inaad ku xannibto iPad-kaaga adoo adeegsanaya sumadda bilowga markii aad xarig ka jareyso Evasi0n 7
Waxaan ku siineynaa xoogaa xal ah oo ku saabsan xannibaadda iPhone ama iPad ka dib markii aad isku dayday inaad sameyso Jailbreak, oo leh calaamadda bilowga oo kuxiran shaashadda
U beddelo Jailbreak Tethered Jail laga bilaabo macruufka 6.1.3 iyo 6.1.5 loona beddelo 'Untethered with p0sixspwn
Hadda waxaad uga gudbi kartaa Jeel-ka Tethered-ka macruufka 6.1.3 iyo 6.1.5 ilaa aan la xiriirin adigoo rakibaya xirmo laga heli karo Cydia, p0sixspwn
Sida loo JAILBREAK macruufka 7 la Evasi0n
Waxaan kuu sharraxeynaa talaabo talaabo ah sida loo Jailbreak iOS 7, labadaba Mac iyo Windows, mahadnaqa Evasi0n7
Dhibaatooyinka ugu horreeya ee iOS 7 Jailbreak
Dhibaatooyinka ugu horreeya ee ku saabsan iOS 7 Jailbreak waxay bilaabayaan inay soo muuqdaan. Maxay yihiin xalka? Waan kuu sharxeynaa
Evasi0n ee macruufka 7 hadda waa la heli karaa. Cashar ku saabsan sida loo Jailbreak.
Evasi0n oo loogu talagalay iOS 7 ayaa hadda la heli karaa. Waxaan ku tusineynaa talaabo talaabo ah sida loo Jailbreak qalabkeena.
Olloclip wuxuu bilaabayaa muraayadaha 3-in-1 ee iPhone 5C
Olloclip ayaa hadda sii daayay muraayadaha indhaha ee 3-in-1 ee loogu talagalay iPhone 5C oo isku midab ah sida dhabarka taleefankan, oo qiimihiisu yahay $ 59,99.
Tallaalada, dhammaan macluumaadka ku saabsan iPhone-kaaga iyo iPad-ka
Tallaalku waa codsi cusub oo loogu talagalay dadweynaha iyo xirfadlayaasha caafimaadka oo leh dhammaan macluumaadka ku saabsan tallaallada
Cusbooneysiin cusub oo loogu talagalay daawashada Pebble ee leh ha ku mashquulin qaabka
Cusbooneysiin cusbooneysiin cusub ah oo loogu talagalay 'Pebble smartwatch' ayaa ku dareysa qaab cusub oo ah 'Do not Disturb' oo la mid ah macruufka
Aqoonsigaaga Taabashada si fiican uma shaqeynayo? Isku day xalkan
Tabobar yar oo talaabooyin ah in la qaado si Aqoonsigeena Taabashada uu si sax ah u ogaado farahaaga si uu u furo qalabka la isticmaalay
Fiidiyowga cusub ee muusikada LeAnn Rimes waxaa lagu duubay iphone
Fanaanada wadanka LeAnn Rimes ayaa soo saartay heesteeda cusub ee "Gasoline and match" oo gabi ahaanba laga duubay iphone.
Kiisaska IPhone ee adeegsada ogeysiisyada flash-ka ah
Kiisaska cusub ee iPhone-ka ayaa ka muuqda suuqa iyaga oo adeegsanaya ogeysiisyada flash-ka ee aaladda oo iftiiminaya naqshadaha gadaashooda.
MiPow Power Tube 2600, xeedho la qaadan karo oo ku xiran isku xidhka danabka
MiPow Power Tube 2600 wuxuu siiyaa awood aad si buuxda ugu buuxiso qalabkaaga cabir aad u kooban oo aan loo baahnayn fiilooyin.
Hadiyadaha Kirismaskan: Qalabka loogu talagalay iPhone-kaaga
Waxaan kuu soo qaadaneynaa taxane soo jeedin ah oo ah qalabyada aan u dooranay iPhone-keena oo aan awoodi karno inaan siino iyaga Kirismaska, maadaama ay yihiin xulashooyin wanaagsan.
Lens-ka Anamorphic ee loogu talagalay iPhone-kaaga, waxaad horeyba u noqon kartaa JJ Abrams soo socda
Muraayad cusub oo anamorphic ah oo u oggolaanaysa saamiga muuqaalka ee fiidyowga 2,4: 1 iyo madasha 16: 9, fikrad ka timid Moondog oo loo heli doono iibinta iPhone 5 iyo 5s bisha Maarso 2014
Sida hadiyadaha looga helo App Store
Waxaan u sharaxeynaa talaabo talaabo ah sida aan u siin karno codsiyada dadka kale, waa ikhtiyaar wanaagsan xilliga Kirismaska
Sida loo keydiyo xogta sicirkaaga si ay u socoto bisha oo dhan
Khiyaamo si loo kaydiyo xogta ku jirta sicirkaaga si ay u socoto bil dhan.
Dacarta dixiriga ah, kiis leh istaag iyo fiilo hillaac ah oo lagu dhex dhisay
Kiiska dixirigoodu waa kiis lagu tilmaamo inuu leeyahay xarig danab dhabarkiisa oo u shaqeeya sidii taageero loogu heli lahaa iPhone-keena.
Sawirada nooc ka mid ah iPhone 5C kiiska daloola ee iPhone 5S ayaa soo muuqda
Nooca loo malaynayo inuu yahay kiiska iPhone 5C ee daloolsan ee loogu talagalay iPhone 5S ayaa u muuqda, kaas oo sida ku cad isha naqshadda 'stucco' ay ku dhowdahay inay suuqa gasho.
Marka ay timaado taageerida aaladaha duugga ah, macruufka ayaa qaada Android
Farqiga u dhexeeya cusbooneysiinta softiweerka ee ay heleen aaladaha Android iyo kuwa ay heleen aaladaha iOS waa iska cadahay, waxayna si fiican uga muuqdaan jaantuskan.
JBL OnBeat Micro, wuxuu kuhadlaa dekedda hillaaca ee iPhone-keena
In kasta oo ay nala joogeen dhowr jiilal, qalabka kala duwan ee loo heli karo iPhone-ka oo wata iskuxiraha Danabka ...
In1, kiiska qalab badan oo loogu talagalay iPhone-kaaga
Kiiskan 'In1 iPhone' waa iib la keenaya qalab aad u faa'iido badan oo nolol maalmeedka ah had iyo jeerna ku weheliya qalabka.
Imika ku iibso Olloclip dahab ama meel cirro ah (xaddidan oo daabacan) (Sicir-dhimista Jimcaha Madow)
PowerUp 3.0: diyaarad warqad ah oo ay maamusho iPhone-ka
PowerUp 3.0: diyaarad warqad ah oo ay maamusho iPhone-ka, ayaa laga heli karaa Kickstarter
Abuur muusig dhaqdhaqaaq adoo adeegsanaya qalabkaaga macruufka ah ee 'AUUG'
AUUG waxay abuurtaa nidaam jiil muusiko ku saleysan dhaqdhaqaaqa iyo taabashada shaashadda ee iOS. Nidaam dhameystiran oo aad ku sameysato muusikadaada
Dhamaan ficilada la samayn karo iyadoo la adeegsanayo tilmaam ku saabsan iOS 7
macruufka 7 leeyahay tilmaam badan si ay u qabtaan falal kala duwan oo maanta waxaan u soo bandhigi doonaa mid kasta oo iyaga ka mid ah
Sida loogu ciyaaro fiidiyowyadaada iPad-ka server UPnP ah
Abuuritaanka server UPnP iyo ku raaxeysiga waxyaabo badan oo badan oo ka mid ah iPad-kaaga ayaa ah mid aad u fudud oo aad ku sameyn karto bilaash.
Dib u eeg Olloclip 4 in 1 loogu talagalay iPhone 5 iyo 5s
Waxaan ku falanqeyneynaa Olloclip 4 1 qalab loogu talagalay iPhone 5 iyo 5s, oo ku habboon dadka jecel sawir qaadista
Sidee loo beddelaa cabirka farta ee macruufka 7?
Maqaalkan, waxaan ku baraynaa sida wax looga beddelo cabbirka font ee macruufka 7 ee iPad-keena iyadoo la adeegsanayo Dejinta iyo Helitaanka
Sidee loo furaa faylasha ePub iBooks adigoon isticmaalin iTunes?
Casharkaan waxaan ku bari doonaa sida loo furo ePub faylasha adigoon isticmaalin iTunes adoo adeegsanaya emaylkaaga
MOGA Ace Power Video Game Controller ee macruufka 7 Hada Laheli Karo
Ciyaaraha fiidiyowga jecel ee leh iPhone 5 ama ka sareeya ayaa nasiib leh, maxaa yeelay waxay bilaabanayaan berri Arbacada ...
Sida ugu dhakhsaha badan ee loo helo maamulaha shaqooyinka badan
Fursad deg deg ah oo lagu heli karo macruufka badan waa inaad afar ama shan farood ku xoqdo shaashadda iPAd halkii aad ka isticmaali laheyd Guriga.
Sideen ku badbaadin karaa iPad-kayga?
IPad-ka waxaa ku jiri kara macluumaad xasaasi ah oo uusan qof walba arki karin. Haddii aad rabto inaad barato sida loo dhigo lambarka sirta ah 'iPad' kani waa websaydhkaaga
Sida loo sameeyo macruufka 7 si toos ah u akhri buugaagtayada: VoiceOver
VoiceOver waa astaan ​​aasaasi ah oo ka mid ah macruufka 7 taas oo noo oggolaanaysa inaan iPad-ka u isticmaalno yaraynta akhriska buugaagta, tusaale ahaan.
Gawaarida kiiboodhka ee iPhone iyo iPad
IOS waxay u oggolaaneysaa tuubbooyinka kumbuyuutarka in loo isticmaalo nooc kasta oo kumbuyuutar Bluetooth ah oo la mid ah
IPhone-kaaga ayaa qaada heerkulkaaga wuxuuna kuu sheegayaa sababta
Kinsa waa heer-kul-kulmeed, marka lagu daro barnaamijka, noqda kalkaaliyahaaga jeebka.
Hadda haa, Siri wuxuu akhriyaa emaylladaada
Iyada oo macruufka 7 waxaan helnay waxoogaa horumar ah. Mid ka mid ah iyaga ayaa ah Siri, oo hadda aan ahayn nooca beta, si buuxda ugu shaqeynaya.
iQi Mobile, xarkaha fiilada ee iPhone
Mobile-ka 'iQi Mobile' waa beddel beddelaad ah oo adeegsanaya tikniyoolajiyadda soo-kicinta. Fursad weyn oo leh laakiin, taas oo u baahan rakibida qalab yar oo ay tahay in lagu qariyo dabool.
Shan tabaha si aad uga hesho wax badan oo ka mid ah BlackBerry Messenger ee iPhone
Shan tabo yar oo waxtar leh oo naga caawiya inaan wax badan ka helno BlackBerry Messenger, codsiga fariimaha degdegga ah ee BlackBerry ee iPhone
Dareenkayga ku saabsan iPhone 5s
Iyada oo iPhone 5s ay gacmaheyga ku jiraan waxaan horey u siin karaa dareenkeyga ugu horeeya ee qalabkan cajiibka ah
Lammaane kasta oo Aqoonsi Taabasho ah oo ay weheliso jibbaarada A7 ee amniga sii kordhaya
Lammaane taabasho kasta oo taabasho ah oo leh qayb gaar ah oo ka mid ah A / chip, taasoo ka dhigaysa badhanka badhanka guriga mid aan macquul ahayn oo ka baxsan Apple.
Sida loo arko furayaasha ku keydisan iCloud Keychain macruufka 7
Xogta ku kaydsan iCloud Keychain waxaa laga heli karaa macruufka 7. Waxaan ku tusaynaa sida loola tashado oo wax looga beddelo.
IPhone 6 wuxuu noqon karaa faallo 5-inji ah
IPhone 6 ee soo socdaa wuxuu noqon karaa faallo, taleefan casriyeysan oo leh shaashad ilaa 5 inji ah
Miyaadan jeclayn saameynta cilladda ee macruufka 7? Adiguna waad iska gab kartaa
Sida loo demiyo saameynta cilladda ama saameynta hufnaanta ee iOS 7 ee xarunta koontaroolka iyo xarunta ogeysiinta.
Sawirrada Moga Ace Power, kontoroolaha ciyaarta fiidiyowga ee iPhone-ka ayaa xaday
Evleaks Twitter ayaa siidaysay sawirro taxane ah oo ka mid ah Moga Ace Power fiidiyowga xakamaynta ciyaarta fiidiyaha ee loogu talagalay macruufka 7 ee dhowaan la sii daayay.
Todobo talobixin si aad uga qaadatid sawirrada muuqaalka wanaagsan ee ka socda iPhone-kaaga
Waxaan kuu soo qaadaneynaa hage yar oo fudud si aad sawirro uga qaadatid muuqaalka qaab aad ufiican oo ka socda iPhone-keena.
Sida loo dejiyo iCloud Keychain qalabkaaga
Shaqada iCloud Keychain waxay kuu ogolaaneysaa inaad furahaaga ka heshid qalab kasta, waxaan kuu sharxeynaa sida loo qaabeeyo
Sidee looga abuuraa dhacdooyinka kalandarka iMessages ama Mail?
Mar labaad barnaamijka iPad News waxaan ku tusaynaa cashar la xiriira macruufka 7: sida loo abuuro dhacdo kalandarka ah inta ka baxsan arjiga.
OtterBox waxay muujineysaa noocyadeeda cusub ee kiisaska biyuhu galaan ee iPhone 5 / 5s / 5c
Otterbox waxay soo saareysaa kiisas cusub oo kala jaan qaada iPhone 5s / 5c / 5 si looga ilaaliyo dhibcaha, biyaha, boorka ama wasakhda.
Tani waa sababta sababta xawaare-hawleedka iPhone 5s uu u shaqeeyo si aad u xun
IPhone 5s Accelerometer waxaa laga helay inay soo saartay shirkad ka duwan iPhone 5
Adeegso qaamuusyada macruufka ah ee iOS 7
Qodobkaan waxaan ku sharaxeynaa sida loo rakibo qaamuusyada iOS 7, iyo sidoo kale sida ay u shaqeyso.
Waxaan muujineynaa sida loo kaydiyo gurmadka iCloud, si wanaagsan loogu maareeyo keydkeena
Saadaasha hawadu kama muuqato xarunta ogeysiiska ee iOS 7? Dhaqaaq adeegyada goobta
Haddii saadaasha hawadu aysan ka muuqan xarunta ogeysiiska ee iOS 7, waa inaad dhaqaajisaa adeegyada goobta.
Talooyin ku saabsan maareynta kaydinta iPhone-kaaga
Waxaan kuu deyneynaa talo soo jeedinno ku saabsan maareynta wanaagsan ee keydinta gudaha ee qalabka macruufka ah ee aan jecel nahay.
Sida loo nadiifiyo iTunes Store keydka kombuyuutarkaaga
Xaalado badan, dukaamada iTunes ee laga isticmaalo kombiyuutarka lama cusbooneysiiyo. Haddii aan dooneyno in la cusbooneysiiyo, waa inaan faaruqino keydka.
Beddel kaarka deynta ee la xidhiidha koontadaada Apple
Beddelida kaarka amaahda ama kaarka deynta ee la xiriira koontadaada Apple waa mid aad u fudud. Waxaan u sharaxeynaa tillaabooyinka si faahfaahsan.
Trick in iOS 7: isticmaal badhanka .com, .es iyo kuwa kale Safari
IOS 7 khiyaano si ay uga dhigto badhanka .com inuu ka muuqdo Safari
Gawaarida kumbuyuutarka ee iOS 7
Imaatinka macruufka cusub, Apple wuxuu cusbooneysiiyay kumbuyuutarka kumbuyuutarka. Qoraalkan waxaad ka heli doontaa dhowr tuuryo oo loo maro howlaha kumbuyuutarka ee iOS 7.
Sidee loogu daraa taageerada aaga waqtiga Kalandarka?
Maqaalkan waxaan rabaa inaan ku tuso sida loogu daro aaga waqtiga taageerada jadwalka qalabkeena si looga fogaado dhibaatooyinka markaan safreyno.
Sida loo xakameeyo gelitaanka internetka ee iPad-kaaga, iPhone-ka iyo kombiyuutarkaaga
Thanks to Apple router waxaad xakameyn kartaa gelitaanka internetka ee qalabka guriga, iyaga oo ku xaddidaya saacado cayiman.
5 tabaha fudud si loo hagaajiyo macruufka 7
Ku hagaaji khibrada macruufka 7 adoo adeegsanaya 5taan tabaha fudud ee hagaajin doona marin u helka qalabka iyo khibradiisa ugu dambeysa.
Sida Loogu Kordhiyo Saldhigyada iTunes Radio
iTunes Radio wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ku darto saldhigyada shaashadda weyn ee arjiga. Waxaan sharaxeynaa sida loo sameeyo.